Ads Housing	Housing
အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale | တိုကျခနျး ရောငျးမညျ / Apartments for Sale | မွကှေကျ ရောငျးမညျ / Land for Sale | အိမျ၊ရုံး ငှားမညျ / Home, Office for Rent | တိုကျခနျး ငှားမညျ / Apartments for Rent | အမျခွံမွေ ဝယျလို၊ ငှားလိုသညျ / Wanted
ဈေးနှုနျး / Price (in kyat) - DESC
ဈေးနှုနျး / Price (in kyat) - ASC
New Ad | All Ads | My Profile | My Ads | Rules	21	Results 1 - 20 of 21	Content	ဈေးနှုနျး / Price Date	Apartment for sale	(Housing / တိုကျခနျး ရောငျးမညျ / Apartments for Sale)
20×70 Mingalar Taungnyunt Township Near mingalarzay
4 th floor	3,800 MMK	04-30-2016	87 Hit(s)	လုံးချင်းအိမ်	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
အမှတ်(၉၈), စိန်ချယ် ၂ လမ်း ,ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ,ရန်ကုနိမြို့ ။
[...]	120 MMK	02-27-2016	95 Hit(s)	အိမ်​ နှင့်​ ခြံ ​ရောင်းမည်​	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
သုဝဏ္ဏ ၂၉ ရပ်​ကွက်​ ရှိ ​ပေ ၆၀ × ၆၀ လုံးချင်း အိမ်​ နှင်​ ခြံ ​ရောင်းမည်​။​ဈေှးုန်း အတင်းအ​လျေ[...]	8,500 MMK	01-25-2016	131 Hit(s)	​မြေညီထပ်​​ရောင်းမည်​	(Housing / တိုကျခနျး ရောငျးမညျ / Apartments for Sale)
လှည်းတန်း၊ရန်​ကုန်​အင်းစိန်​လမ်းမ​ဘေး​မြေညီထပ်​အခန်း​ရောင်းမည်​။ထပ်​ခိုးပါသည်​​အေးစိမ့်​​နေပြ[...]	200,000,000 MMK	12-24-2015	133 Hit(s)	လှည်းတန်းစံရိပ်​ငြိမ်​တိုက်​ခန်းငှားမည်​	(Housing / တိုကျခနျး ငှားမညျ / Apartments for Rent)
ရန်​ကုန်​အင်းစိန်​လမ်းမအနီး လှည်းတန်း စံရိပ်​ငြိမ်​တွင်​ရှိသည့်​
လူကို[...]	400,000 MMK	12-24-2015	147 Hit(s)	2000 sq.feet Office for RENT	(Housing / အိမျ၊ရုံး ငှားမညျ / Home, Office for Rent)
Near Kandawgyi. Near Shangrila towers just south of Kandawgyi Royal Lake.
Basic decoration (parti[...]	5,000 MMK	10-13-2015	148 Hit(s)	ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၈၇ ရပ်ကွက်	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
ပေ ၂၀×၆၀ သဒ္ဒါလမ်း ပုဏ္ဏမီ ကျောကပ် ၈၇ရပ်ကွက် လူနေ လက် ရှိစလစ် ပါမစ် အမည်ပေါက်သည်အထိတာဝန်ယူပေးမည်။ ( ပု[...]	350 MMK	06-25-2015	168 Hit(s)	လှည်းကူး။သန်လျင်	(Housing / အမျခွံမွေ ဝယျလို၊ ငှားလိုသညျ / Wanted)
တိုက်ခန်း။အိမ်သေးသေးလပိုင်းငှားလို[...]	05-07-2015	191 Hit(s)	မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့အကြီးမားဆုံး​လေဆိပ်​တည်​​ဆောက်​မည့်​ပဲခူြး	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
ပဲခူးမြို့ရဲ့စီးပွားစုံတည်​ရှိပြီးမြို့လည်​​ခေါင်​ဖြစ်​သည့်​ဘဏ်​​ပေါင်းစုံရှိရာ​နေရာမှာ(60×120)​ပေရ[...]	18,000 MMK	04-05-2015	234 Hit(s)	တိုက်ခန်းမြေညီထပ်ရောင်းမည်	(Housing / တိုကျခနျး ရောငျးမညျ / Apartments for Sale)
သမိုင်းလမ်းဆုံအနီး/တိုက်သစ်။	30,000,000 MMK	11-30-2014	283 Hit(s)	Ground floor room for sale	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
Near to Thamine Junction.Locateted in Mayangone Township.Very near school,market,busstop.Can negotia[...]	300 MMK	11-27-2014	283 Hit(s)	Ground floor room for sale	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
Near to Thamine Junction.Locateted in Mayangone Township.Very near school,market,busstop.Can negotia[...]	300 MMK	11-27-2014	260 Hit(s)	ယာမြေ	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
ပုဂံ ညောင်ဦး ပုဂံမြို့သစ် ဂင်္ဂါဟိုတယ်ဇုန် ၄ + ညောင်ဦး အဝေးပြေးကားလမ်းမ ဖေါက်လုပ်မည့် လမ်းနေရာအနီး ယာေ[...]	120 MMK	10-10-2014	259 Hit(s)	တာ​မွေ တိုက်​ခန်းအ​ရောင်း	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
တာ​မွေ ​ရွှေဗဟို​ဆေးရုံ orange မျက်​​စောင်းထိုး ​ဆေးရုံ ​ဈေး ​ကျောင်း မူကြို မီးသတ်​ ရဲစခန်း တို့[...]	700 MMK	09-27-2014	752 Hit(s)	အမြန်​လမ်း​ဘေး​မြေ​ရောင်းရန်​	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
နှစ်​ ၃၀ လုပ်​ပိုင်​ခွင့်​ကျပြီး​မြေများ​ရောင်းရန်​ရှိသည်​[...]	09-24-2014	528 Hit(s)	Nice location in downtown	(Housing / တိုကျခနျး ရောငျးမညျ / Apartments for Sale)
(49th Street ) For Sale
(1500 Sq ft)(25 X60) 49th Street, middle block,
6th Floor Puzundaun[...]	09-13-2014	661 Hit(s)	49 Street	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
6th Floor Puzundaung[...]	09-13-2014	459 Hit(s)	နွယ်​​အေးရပ်​ကွက်​၊နွယ်​နီလမ်း၊၁၂​ပေခွဲ၅၀​ပေ၊တိုက်​သစ်​	(Housing / တိုကျခနျး ရောငျးမညျ / Apartments for Sale)
​ဈေးနှုန်းညှိုနှိုင်းနိုင်​ပါသည်​[...]	320 MMK	08-22-2014	431 Hit(s)	အ​နော်​ရထာလမ်းမ​ပေါ်တိုက်​ခန်းကျယ်​​ရောင်းမည်​	(Housing / တိုကျခနျး ရောငျးမညျ / Apartments for Sale)
အ​နော်​ရထာလမ်းမ​ပေါ်၊ပုစွန်​​တောင်​မြို့နယ်​။၂၅​ပေ၅၅​ပေ။၈လွှာ။အခန်း၂ခန်းဖွဲ့ပြီးကြိုးဖုန်းပါ။[...]	450 MMK	08-22-2014	515 Hit(s)	သိန်း ၁၅,၀၀၀ = အိမ်+ မြေ သင်္ကန်းကျွန်း ဇဝန	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
လုံးချင်းအိမ်နှင့် ခြံ ရောင်းမည်။
သင်္ကန်းကျွန်း၊ သုမင်္ဂလာလမ်း ဝန်းကျင်။
Junction Zawana အနီး။
သီ[...]	15,000 MMK	06-17-2014	577 Hit(s)	StartPrev12NextEnd
Thanks to everyone who use this and who helped us make this happen. Good luck to everyone!
လိုသလို ရှာပါ / Search Classifieds
Birthday/ Wedding/ Funeral
အခမဲ့ ပေးမညျ / Free
ဆေးပညာ ဆိုငျရာ/ Medical
ပညာရေး ဆိုငျရာ/ Educational
ကှနျပြူတာ ဆိုငျရာ/ Computing
ရောငျးခရြေး ဆိုငျရာ/ sales and marketing
ဟိုတယျ စားသောကျဆိုငျ / Hotels & Restaurants
ခရီးသှား လုပျငနျး / Travel & Tours
အငျဂငျြနီယာ / Engineering
All other job vancancies
အိမျအကူ / Housekeeper
ဖုနျး၊ ဆငျးကဒျ၊ အပိုပစ်စညျး (အသဈ)/ new hand-sets
ဖုနျး၊ ဆငျးကဒျ၊ အပိုပစ်စညျး (တပတျရဈ)/ Second-Hand
Bus & trucks to sell
အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale
တိုကျခနျး ရောငျးမညျ / Apartments for Sale
မွကှေကျ ရောငျးမညျ / Land for Sale
အိမျ၊ရုံး ငှားမညျ / Home, Office for Rent
တိုကျခနျး ငှားမညျ / Apartments for Rent
အမျခွံမွေ ဝယျလို၊ ငှားလိုသညျ / Wanted
ဖုနျး၊ ကှနျပြူတာ၊ အီလကျထရောနဈ
ရှေ၊ လကျဝတျ ရတနာ၊ နိုငျငံခွားငှေ / Gold, ForEx
ကုနျပစ်စညျး မြိုးစုံ (အသဈ)/ Commodities
ကုနျပစ်စညျး မြိုးစုံ (အဟောငျး) / second-hand
ခဈြသူ မရှိသေးတဲ့ အမြိုးသားမြား
ခဈြသူ မရှိသေးတဲ့ အမြိုးသမီးမြား
သာရေး/ Birthday/ Wedding
ကှနျပြူတာဆိုငျရာ အလုပျချေါစာမြား (1782)
ဆေးပညာဆိုငျရာ အလုပျချေါစာမြား (83)
အငျဂငျြနီယာဆိုငျရာ အလုပျချေါစာမြား (93)
ရောငျးခရြေးနှငျ့ ဈေးကှကျဆိုငျရာ အလုပျချေါစာမြား (419)
စကျရုံနှငျ့ ကုနျထုတျလုပျငနျး အလုပျချေါစာမြား (370)
စားသောကျဆိုငျ /ကုနျ အလုပျချေါစာမြား (883)
ရုံးလုပျငနျးဆိုငျရာ အလုပျချေါစာမြား (342)
ဈေးနှုနျး / Price	Date
ယာမြေ	(Housing / အိမျ ရောငျးမညျ / Homes for Sale)
ပုဂံ ညောင်ဦး ပုဂံမြို့သစ် ဂင်္ဂါဟိုတယ်ဇုန် ၄ + ညောင်ဦး အဝေးပြေးကားလမ်းမ ဖေါက်လုပ်မည့် လမ်းနေရာအနီး ယာေ...	120 MMK	10-10-2014	259 Hit(s)	လှည်းတန်းစံရိပ်​ငြိမ်​တိုက်​ခန်းငှားမည်​	(Housing / တိုကျခနျး ငှားမညျ / Apartments for Rent)
လူကို...	400,000 MMK	12-24-2015	147 Hit(s)	Who's Online
Welcome to Myanmar Job Searcher. This isaCSR (corporate social responsibility) project by Myanmars.NET for our people to get jobs easily.
We provide both Myanmar and international jobs in United States, Japan, United Kingdom, Australia, Singapore, or Malaysia.
page views so far.	ကက